Umuntu uzihlela kanjani emhlabeni ongavumi ukuhleleka? - Bayede News
Isikhathi sokuqala konyaka siyisikhathi esibalulekile ebhizinisini nasempilweni yomuntu ozimisele ngenqubekelaphambili kwakwenzayo. Kuyaye kube yisikhathi esihle sokubuka unyaka owedlule, bese umuntu ezihlela kabusha akhele phezu kwalokho awuphethe unyaka kusesandleni.
Unyaka owedlule siwuphethe sihubela phansi, kungekho ukubhiyoza okwejwayelekile ngoba bese kubonakala izidubulo zokhuvethe selukhuza ibuya futhi lubuya ngamandla edlula awesiwombe sokuqala.
Sesiqeda inyanga yokuqala onyakeni kodwa akukacaci ukuthi iyiphi imboni evule ngokuphelele. Umuntu ozimisele ukusungula ibhizinisi kulesi sikhathi kumele azibone esenhlanhleni ngoba unethuba lokuhlola izimboni ezehlukene, abone ukuthi zenze kanjani ukuphila zedlule ezinyangeni ezisondela onyakeni zivalile.
Ngifisa namuhla sike sibuke izimboni ezimbalwa sibuke ukuthi zingaqala kuphi ukuzihlela kabusha ukuze zibhekane nezinselelo ezifuze imvalelwakhaya efike nokhuvethe.
Imboni yezokuvakasha singayithatha njengemboni ekhahlamezekile kakhulu ngokufika kokhuvethe. Okukhahlameze imboni yezokuvakasha wukumiswa kokusebenza kwezimboni ezincikene nezisebenzelana nayo le mboni.
Imboni yezokuthutha iyingxenye yezokuvakasha. Ezokuthutha zivaleke kusukela ezingeni lasekhaya kudlule kuye kusifundazwe, kuye kuzwelonke kuze kuphumele ngaphandle kwezwe. Uma umndeni ungasakwazi ukuhlanganyela ndawonye udle isidlo uthokoze ndawonye lokho kusho lukhulu emnothweni. Sesizwe kaningi lapho bekuhlangene umndeni wabhubha cishe wonke ngenxa yokhuvethe.
Uma kuzohlanganwa kuthengwa ukudla neziphuzo ezinhlobonhlobo, kube nomthelela omuhle emnothweni. Kuke kwaba nesikhathi lapho kuvalwe nokuhamba kwamatheksi ethutha abantu. Kwema nse ukuhamba kwabantu, noma bezivakashela nje.
Indaba yamabhanoyi iseyinzukazikeyi kuze kube manje. Izinkampani eziningi zezindiza ziphoqekile ukuba zimise izindiza, ezinye zizidayise. Ukungcebeleka nokuvakasha obekwenzeka kalula ngamabhanoyi kuphele ngomzuzwana kufika imvalelwakhaya. Kuze kube manje akukavuleleki ukuhamba ngokukhululeka ugibele ibhanoyi ngaphakathi nangaphandle kwezwe.
Ukuvakasha kusho ukuthola izindawo zokuhlala ezingamahhotela nezinye ezikulelo zinga. Ukuvaleka kwamahhotela kufinyelele ezingeni lapho amanye kuphoqeka ukuba avale iminyango yokuhweba, abasebenzayo baphelelwa wumsebenzi.
Ngamanye amazwi umuntu obefisa ukusungula ibhizinisi lehhotela noma iBnB kumele azihlele kabusha ngoba lelo bhizinisi alinawo umsebenzi otheni kulesi sikhathi. Kula masonto ambalwa edlule kuphume isimemezelo sokuvalwa kwehhotela elikhulu elisenkabeni yedolobha laseThekwini, iHilton. Uma ulazi idolobha laseThekwini, nemicimbi yalo, nezivakashi ebezithola ukunethezeka ziphephile, kuyacaca ukuthi mkhulu umonakalo embonini yezokuvakasha nakulezo ezincikene nayo.
Kunabahwebi amabhizinisi abo amiswe yimikhiqizo abayithumela emahhotela nasezindaweni zokudlela. Imifino enhlobonhlobo edliwa emahhotela iyimikhiqizo yosomabhizinisi. Ukuvalwa kwehhotela elikhulu kusho ukuphela kwebhizinisi lalowo mhwebi, kanti ngokunjalo kusho ukuphela kwebhizinisi embonini yezolimo ekhiqiza izinhlobonhlobo zemifino. Kuyiphupho lanoma yimuphi umlimi ukuthola imakethe lapho ezothumela khona imikhiqizo yakhe ngesamba, asheshe athole inzuzo ngokulima kwakhe.
Ihhotela lithembele kakhulu ekuphiseni ngotshwala. Kunabantu okuthi uma bevakashile kube yithuba elihle lokungcebeleka baphuze bazi ukuthi kabazukushayela moto, ngoba indawo yokulala baphuzela kuyo.
Osomabhizinisi abaningi bayathanda ukuya emahhotela beyokhipha isithukuthezi, bahlale ndawonye baxoxe izindaba ezehlukile kwezomsebenzi kodwa zibe sezingeni lebhizinisi. Imihlangano ebanjelwa emahhotela iba mnandi ngoba ekupheleni kosuku abebethamele umhlangano bayangcebeleka bangenise imali ehhotela.
Imboni yotshwala ingaphansi kwengcindezi enkulu ngoba iminyango yayo ivalwe thaqa uHulumeni ngenxa zokhuvethe. Uma uyibhekisisa le ndaba, akusibo utshwala obusabalalisa ukhuvethe.
Utshwala abuthintani nokhuvethe, kodwa isikhalo siqhamuka ezindaweni zokwelapha. Ukuvalwa kokudayiswa kotshwala kusho ukuthi abakhiqiza utshwala kumele bame ukukhiqiza. Ukuma kwemboni kusho ukuma kwemishini egaya utshwala, okunomthelela kuzisebenzi ezikule mboni.
Ukuphikelela yimfihlo yabaningi abazinzile
Emasontweni amabili edlule inkampani iHeineken imemezele ukumisa izinhlelo zesakhiwo ebesizokudla izigidigidi eziyisithupha ogwini olusenyakatho yezwe.
Lokhu kumiswa kwezinhlelo kusho ukuvaleka kwamathuba emisebenzi engaphezu kwamakhulu amane kule lizwe. Uma kuvala inkampani enkulu kangaka kucacile ukuthi abahwebi esingabathatha njengabancane abangabanikazi bamabhodlelasitolo basenkingeni enkulu.
Imboni yotshwala ize ilimaze izindawo zokudlela lapho abantu bethi bedla babe bezithokozisa ngeziphuzo.
OyiSikhulu Esiphezulu kuRestaurants Association of South Africa, uNks uWendy Alberts, nabanikazi bezindawo zokudlela baqale umkhankaso ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, lapho bekhala ngobunzima ababhekene nabo ngenxa zokuthi kumele bavale iminyango yokuhweba ngaphambi kwehora lesishiyagalolunye ebusuku, futhi kabavunyelwe ukudayisa utshwala. Bayaphoqeka ukunciphisa isibalo sezisebenzi, kulimala ukusebenza kwebhizinisi.
Lesi sithombe esingenhla senza kube lukhuni satshe ukunquma ukuthi ofisa ukusungula ibhizinisi angacabangela kuyiphi imboni.
Ngikushiyela kofundayo ukuba asabalale ngengqondo abheke ngokubanzi izintuba ezingamphumelelisa.
Kudinga ukucabangisisa acwaninge kabanzi. Abanye ongoti bezamabhizinisi bathi yisikhathi esihle lesi sokusungula ibhizinisi ungekho ngaphansi kwengcindezi, unethuba elanele lokuzihlela nokuhlolisisa lokho ongagxila kukho.